Izindaba - I-R & D Ephumelelayo | I-Foregene 'SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Multiplex PCR Fluorescent Probe Method)' asikho isidingo sokuhlanzwa kwe-nucleic acid, kuthatha imizuzu engama-40 kuphela!
I-R & D ephumelele | I-Foregene 'SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Multiplex PCR Fluorescent Probe Method)' asikho isidingo sokuhlanzwa kwe-nucleic acid, kuthatha imizuzu engama-40 kuphela!
Isibikezelo- 'I-SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Multiplex PCR Fluorescent Probe Method)‘
Kusukela kwaqala ukubheduka, u-Foregene uye wakunakisisa, futhi ngesikhathi esifanayo wahlela ngokuphuthumayo amabutho ocwaningo lwezesayensi, futhi wafaka imali okokuqala ocwaningweni nasekwakhiweni kwekhithi entsha yokuthola i-coronavirus nucleic acid, ngokuya ngeminyaka kwezulu lobuchwepheshe kanye nesipiliyoni, i-develope the I-SARS-CoV-2 Nucleic Acid Detection Kit (Multiplex PCR Fluorescent Probe Method) ngesikhathi sokuqala.
Ikhithi isebenzisa ubuchwepheshe obunelungelo lobunikazi be-PCR eqondile ye-Foregene (i-PCR eqondile), eqeda isidingo sokuhlanzwa kwesampula nge-nucleic acid. Ngemuva kokwelapha okulula kwe-nucleic acid, kungangezwa kusisombululo sokuphendula sokutholwa komshini. Ukusebenza kulula futhi kuyashesha, kuthatha kuphela imizuzu engama-40 kuye kwengama-60 ukuthola imiphumela yokuhlolwa engama-96, okunciphisa ngempumelelo umthwalo wabasebenzi opharetha. Izimo zohlelo lokusebenza ziyaguquguquka. Uhlobo olulodwa kuphela lwensimbi ye-PCR ye-fluorescent edingekayo ukuhlinzeka ngemiphumela ephumelela kunazo zonke yokuvikela nokulawula ubhubhane.
Izinzuzo ze-PCR eqondile ngokuqhathaniswa ne-PCR yendabuko
Ngaphezu kwepneumonia yegciwane, i-pneumonia yebhaktheriya nayo iyisifo esithathelwanayo esingenakushaywa indiva.
Ekwelapheni izifo ezithinta ukuphefumula, ubunzima obukhulu obubhekene nodokotela bezimo eziphuthumayo ukuthi abakwazi ukuthola idatha ye-pathogenic ngesikhathi esifushane. Ukulahleka kwemiphumela yokuhlolwa kwenza ukuthi odokotela bafune usizo kuma-antibiotic abanzi (angathinta ama-bacterium ahlukahlukene), ama-antibiotic azothuthukisa ukukhiqizwa kwamagciwane amelana nemithi eminingi.
Lapho ubhekene nale nkinga, u-Foregene usungule indlela ephansi yokuphefumula ye-pathogen kit (indlela ye-multiplex fluorescent PCR).
Ikhithi futhi ayidingi ukuhlanzwa kwe-nucleic acid kwamasampuli eziguli. Isebenzisa inhlanganisela ye-PCR eqondile ne-PCR ye-multiplex ukuthola iStreptococcus pneumoniae, i-methicillin-resistant Staphylococcus aureus, nokulutha komkhuhlane ku-sputum noma i-bronchial lavage fluid cishe ehoreni elilodwa. Amagciwane egazi nezinye izifo ezivamile zokuphefumula ezisezingeni eliphansi ezijwayelekile ezi-15 zingahlukaniswa kahle phakathi kwama-bacteria ajwayelekile namagciwane e-pathogenic. Sikholwa ukuthi kuzolindeleka ukuthi kube yithuluzi elisebenzayo lokusiza odokotela ekusebenziseni kahle imithi.
Njengenye yezinkampani ezifuywayo emkhakheni wokuxilongwa kwamangqamuzana, lapho ubhekene nalolu bhubhane, abasebenzi beR & D nabasebenzi bezokukhiqiza baseFoegene badele isikhathi sokuhlangana nemindeni yabo ngesikhathi seholide leSpring Festival. Bahlangana ndawonye, ​​banamathela kokuthunyelwe kwabo, basebenza isikhathi esengeziwe. Kwenziwe imizamo engapheli yokukhuthaza ukuvimbela nokulawulwa kwalo bhubhane.
Ngesikhathi esibucayi kakhulu salo bhubhane, simunye ukunqoba ubunzima, futhi sizimisele ukunikeza ukuvikelwa okwanele okuyisisekelo kwabasebenzi bezokwelapha abaphambili ukuze banqobe lolu “bhubhane lwempi” kanye nezwe kanye nabantu!
Isikhathi Iposi: Jan-29-2020